WAR DEG DEG AH: Fanaanad Caan ah Oo goor dhaw geeriyootay#aqriso Magaca | Xaqiiqonews
WAR DEG DEG AH: Fanaanad Caan ah Oo goor dhaw geeriyootay#aqriso Magaca
Waxaa geeriyootay fanaanadda reer siiriya haweeyneyda lagu magcaabo Najaax Xafiid oo caan ku aheyd magaca ah (Fadhuuma) sida lagu daabacay Bogga facebook ay ku kulmaan fanaaniinta reer siiriya.
Bogga ayaa daabacay qoraal uu ku leeyahay” waxaa isbitaalka Ibnui-nafiis oo ku yaalla dimishiq ku geeriyooday najaax xafiid waxaana goordhaw la soo qaadi doonaa meydkeeda”
Haweeneyda ayaa ku soo caan baxday heestii“fadhuum fadhuum fadhuum” oo aheyd hees ku dhax jirtay musalsalka caan baxay ee‘صح النوم'”hurdada ka kac” musalsalkaasi oo caan ka ah wadanka siiriya iyo guud ahaan wadamada carabta.
fanaanaddan ayaa sida wararka ay sheegayaan waligeed dhalin wax canug ah markii arimahaas wax lag weydiiyana wax ay ku jabaabi jirtay hadalkeeda caan ka baxay ee“أعتبر أي طفل هو ابني'” ” canug walbo waxaan u heystaa in uu yahay Wiilkeyga”
Najaax Xafiid ayaa la sheegaa in musalsalka Qalbikeeda aan ka go,aynin uu ahaa musalsalka loo yaqaan”البقعة السوداء’ ” Qeybta madow” oo ay ku jileysay qeybta hooyo dhashay labo wiil.
waxaana Najaax Lagu Xasuusan doonaa Riwaayado Dhowr ah Waxaana ka mid ah filimada lagu xasuusan doonaa
‘يوميات أبو عنتر'(maamlimihii Abuu cantar)
نهاية رجل شجاع’ (Dhamaadka ninka geesigga ahaa)
الخط الأحمر’ ( Diilinta Gaduudan)
‘أسياد المال’. (Mudanayaasha maalka)
iyo kuwa kale oo badan .